Ny Lapa Tsara Tarehin’i Yanukovitch Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2014 1:50 GMT
Ny lapan'ny filoham-pirenena Yanukovich, toerana mamadika ny nofinao ho tena izy. (Ary avy eo miantonta ety an-Tany.) Sary nafangaron'i Kevin Rothrock.
Rehefa nandositra niala an'i Kiev i Viktor Yanukovich tamin'ny herinandro lasa, tanaty rotoroto no nandaozany ny trano. Ireo olon-tsotra sy mpanao gazety tonga nandrakotra ilay lapa nilazoan'ny tompony taty aoriana, tetsy andaniny, dia nivalampatra naka bahana tsara nitolagaga tamin'ny harem-be izay na dia ireo mpanakiana mafy an'i Yanukovich aza dia nahita izany ho fanafintohinana tokoa. Vantany vao tonga ireo mpitsidika voalohany, dia nahita andianà mpiambina efa tsangan'olona fotsiny sisa, izay raha ny marina dia nitondra ireo mpanao gazety nitety ilay tanàna, nanasa azy ireo hanapika sary [ru] mba hahitàna “mibaribary ny fomba niainan'ny Filohan'i Okraina. “
Afaka niditra tao an-toerana ilay Rosiana malaza mpitoraka biloagy an-tsary, Ilya Varlamov, naka sary ireo toerana samihafa tao anatin'ity tanàna mirefy 140 hektara ity. Nisy toerana fitehirizana biby tao, feno biby fitaiza sy nafarana avy any ivelany. Ny garazy indray feno fiara lafo vidy tsy fahita firy (collection). Mifantsika eo amoron'ny renirano iray manokana, sambolay iray nampiasaina ho toy toerana fisakafoana. Ary mazava ho azy, nisy kianja an'olon-tsotra filalaovana ‘golf’. Nibosesika niditra tao an-trano hijery ny fiasan'ny volan-ketra naloany ireo Okrainiana. Nisy fanasana ho an'ny daholobe [ru] nivoaka tao amin'ny Twitter nanasa ny vahoaka ho tonga sy hijery hahita maso ny ao amin'ilay lapa.
ilay sambolain'ny taonjato faha-19 an'i Yanukovich, natao ho toeram-pisakafoana.
Fa ny mahagaga, tena mangingiana be ny resaka eny anaty tontolon'ny bilaogy Rosiana. Ekena fa efa zava-mahazatra an'ireo Rosiana ny ohatra omen'ireo mpisehatra politika any aminy amin'ny resaka harena sy ny tsy fahaiza-manavaka ny ratsy sy ny tsara, satria mitete tsy tapaka ety anaty aterineto ny sarin'ny toeram-ponenan'izy ireo. Tafiditra taminà tantara ratsy tahaka izany i Vladimir Yakunin, filohan'ilay orinasam-panjakana mitantana ny fitaterana an-dalamby Rosiana, rehefa injay namoaka porofo [ru] momba ny fananan'i Yakunin tany mirefy 70 hektara any ivelan'i Maosko ilay bilaogera Alexey Navalny.
Miaraka amin'io tantara io ao an-tsainy, nivazivazy ny iray tamin'ireo mpamaky an'i Varlamov’ hoe tsy maintsy hialona ny lapa be midadasik'i Yanukovich i Yakunin :
Tsy hahita an'itony sary itony i Yakunin.
Rosiana bialogera iray hafa i Oleg Kozyrev nampahatsiahy an'ireo mpamaky ny mikasika ilay fanamarihan'i Vladimir Putin tamin'ny 2008, fony izy nilaza ny tenany ho andevo tanatinà sambo.
Mazava ankehitriny izay tao an-tsain'i Putin fony izy nilaza hoe andevo ao anaty sambo lery. Ity ny sambon'i Yakunin.
Andrey Kozenko mpanao gazetin'ny Lenta.ru nibitsika hoe :
Raha ny filaza ankapobeny, taorian'ny nahitàna ireo saripika avy ao amin'ilay toeram-ponenana , [tsy maintsy lazaiko]: manana fitiavan-javatra mahatsiravina daholo ireo mpanambaka vahoaka.
Laharam-be handeha hibanjina ny haren'i Yanukovich
Nanamarika tao amin'ny Twitter i Alexander Plushev, mpanao gazety hoe :
Manontany tena aho ankehitriny hoe mba firy amin'ireo olona [Maoskovita] no mety handeha ho ao Novo-Ogarevo [toeram-ponenan'i Putin any ivelan'i Maosko]. (Aleo angaha lazaintsika fotsiny hoe, raha sendra mitranga ny fotoana mety hahafahana manao izany.)
Namaly tamin-kanihany i Vladimir Varfolomeev :
Araraoty dieny izao – efa mba nanao famandrihana amin'ny fitsangantsanganana ve ry zareo? Leetyy e. Be zavatra tsy hitako indray nandritry ny fialantsasatra
Nanolotra ity vahaolana manaraka ity i Andrey Davidov :
Afaka mamorona rafitra elektronika ho fitantanana ny filaharana ianareo